धुलिखेल अस्पतालमा मृत्यु भएकी महिलामा कोरोना संक्रमणबारे पुष्टि भइसकेको छैनःप्रवक्ता देवकोटा
काठमाडौँ । धुलिखेल अस्पतालमा उपचारकै क्रममा मृत्यु भएकी महिलामा कोरोना संक्रमण भए नभएको बारै परीक्षण जारी गरेको स्वथ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बताएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.विकास देवकोटाले धुलीखेल अस्पतालमा मृत्यु भएकी महिलाको थप परिक्षण भइरहेको स्पष्ट पारे ।
अहिले नै उनको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको भन्न नसकिने डा. देवकोटाले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।
२९ वर्षकी ती महिलाले बैशाख २३ गते काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पतालमा बच्चा जन्माएकी थिइन् । शिक्षण अस्पतालबाट २४ गते डिस्चार्ज भएकी उनलाई बाह्रबिसे पुगेपछि स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको थियो । त्यसपछि उनलाई स्थानीय स्वस्थ्य संस्थामा उपचार गराइएको र थप समस्या आएपछि उनलाई धुलिखेल अस्पताल ल्याइएको थियो । अस्पतालका अनुसार राति साढे ९ बजे इमर्जेन्सीमा ल्याउँदा उनको अवस्था निकै गम्भिर थियो । साथै स्वास फेर्न समेत निकै कठिन भइरहेको थियो ।
स्वास फेर्न गाह्रो भएपछि ट्युब राखेर भेन्टिलेट गर्दा पनि बचाउन नसकिएको अस्पतालले जनाएको छ । त्यसपछि उनको स्वाब लिएर परीक्षण गर्दा आज बिहान रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हो । थप यकिन गर्न अहिले नमूना राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पठाईएको अस्पतालले जनाएको छ ।
कोरोना संक्रमणको आशंकामा उनको स्वाव संकलन गरी पीसीआर परिक्षण गर्दा शंकास्पद रिपोर्ट आएपछि पुनः परीक्षण गर्न पठाइएको धुलिखेल अस्पतालका प्रवक्ता डा. सुमनराज ताम्राकारले जानकारी दिएका छन् ।
प्रकाशित ३ जेठ २0७७ , शनिबार | 2020-05-16 10:58:33